Waaheen Media Group » Ciidamada Booliska Somaliland oo Gacanta ku dhigay Dablay Hubaysan oo Gobolka Sool dad ku dishay Home
Browse:Home Videos Ciidamada Booliska Somaliland oo Gacanta ku dhigay Dablay Hubaysan oo Gobolka Sool dad ku dishay	Ciidamada Booliska Somaliland oo Gacanta ku dhigay Dablay Hubaysan oo Gobolka Sool dad ku dishay
on May 14, 2017 |
Comments Off on Ciidamada Booliska Somaliland oo Gacanta ku dhigay Dablay Hubaysan oo Gobolka Sool dad ku dishay	Hargeysa(Waaheen) Taliska Ciidanka Booliska ee Gobolka Saraar oo shir jaraa’id oo ay ku qabteen magaalada Caynaba ayaa sheegay in ay gacanta ku soo dhigeen dablay dhawaan dad socota ah ku dishay wadada u dhexeysa Caynaba iyo Laascaanood.
Taliyaha Qaybta Gobolka Saraar Gashanle dhexe Mursal ayaa yidhi. “Ciidanka Boolisku waxay soo qabteen dablaydii dishay dirawalkii baabuurkii ay saarnayeen dadka rakaabka ahi, baabuurkaasi oo marayey inta u dhexeysa Oog iyo Gumays, ninka kooxdan eedeysani dishay ayaa la odhan jiray cawil Ahmed Siciid, ragga aanu soo qabanayna waxay ahayd saddex qof oo imika gacanta ciidanka ku jiray”. Gaashanle dhexe Mursal ayaa sidaasi sheegay.
Dablaydan ciidanka Boolisku sheegen in ay soo qabteen ayaa bishii hore jidgooyo u galay gaadhi nooca loo yaqaano Noa oo u socday magaalada Garoowe, halkaasina u dilay hal qof.